Pi Nyefee na KYC - Zlowdaj.si
Horoscope kwa izu
Aries kwa ụbọchị horoscope
Taurus nke izu kwa izu
Hempe horoscope kwa izu
Horoscope nke Ọrịa Cancer kwa izu
Horoscope kwa izu Leo
Kpakpando kwa izu na horoscope
Akwụkwọ ebe a na-egbu egbu kwa izu
Họroscope kwa izu, Scorpio
Horoscope kwa izu Sagittarius
Kpakpando a na-enwe kwa izu
Horoscope kwa izu bụ Aquarius
Pisces kwa izu horoscope
Horoscope & Ntughari
Nrọ na nkọwa ya
Amaokwu na ọmụmụ
Amaokwu maka ụbọchị ụmụ nwanyị
Amaokwu maka ụbọchị ịhụnanya
Amaokwu ekeresimesi na ekele ohuru
Egwu na-ezu ike
Echiche ndị ziri ezi
Ulo na ubi
Nnọọ!Banye na akaụntụ gị!
Usoro ojiji nke ụlọ ahịa dị n'ịntanetị
Nnọọ! Banye na akaụntụ gị
Chefuru okwuntughe? Chọọ enyemaka
Anyị ga-ezitere gị paswọọdụ site na e-mail.
Ihe niileNọmbaNrọ na nkọwa yaOmimiGba afa
Kedu ihe ọ pụtara na nrọ nke ụgbọ ala?
Kedu otu izu a si egosi anyị?
Kedu ihe nrọ banyere ntutu pụtara?
Kedu ihe bụ ọtụmọkpọ na ihe ọ bụ amulet?
Ulo Nkà na ụzụ Mgbakọ Pi Network nyefe na KYC
Pi Network nyefe na KYC
Ọnwa Mbụ 23, 2020
Ndị na-ahụ maka ngwa cryptocurrency PI Network nwere, dị ka ekwere na nkwa, weputara mgbakwunye mkpụrụ ego!
Offọdụ n'ime ndị ahọpụtara enweela ike ịnwale ọrụ ahụ ịnyefe ego n'etiti ndị ọrụ. Ya mere, otu onye ọrụ na-akọ na ọ zụtara mmanụ a beeụ sitere n'aka onye ọrụ ọzọ nke ọ (gụnyere ụgwọ nzipu ozi) kwụrụ na PIs ????.
KYC ma ọ bụ nyocha site na ngwa Yoti
Ọ bụrụ n'ịchọrọ inweta ya n'onwe gị ohere nke cryptocurrency na-enyefe Pi, ọ ga-adị mkpa ka ị buru ụzọ gafere nkwenye nke njirimara. Easiestzọ kachasị mfe iji mee nke a bụ site na ngwa Yoti a ma ama,
nke ga-ajụ gị maka ozi nkeonwe. Usoro ya n'onwe ya dị mfe. Ọ dị mkpa foto paspọtụ wee si na foto enwetara na ngwa ahụ n'onwe ya na-abanye data niile weghaara. Ikwesiri iwere onwe gi ozo kari onwe gi nke puru iche karie ya.
Scda egwu? Sam mere ihe nile akowara. Ngwa Yoti bụ ngwa ama ama n'ụwa niile maka ịchekwa data nkeonwe nke ị nwere ike iji gosipụta ihe dị iche iche n'ịntanetị. O di nwute, ọ gaghị arụ ọrụ na-enweghị ya ma ị ga - enwe ike ilele mkpụrụ ego "ọkụ" na ihuenyo ekwentị gị. Ọ bụ ihe ezi uche dị na ya na onye na-ewepụta PI ga-ejide n'aka na njirimara nke onye ọrụ akaụntụ ma ọ bụrụ na ha chọrọ ijide nchekwa nke mbufe na ịkwụ ụgwọ.
Echefula ohere ị ga - enweta ma debanye aha gị n'efu! Jiri koodu Qoiquratz
Mụtakwuo maka ọkụ cryptocurrency PI NETWORK!
???? Kedu mgbe ị ga-akwụ ụgwọ ego PI Network?
N'ezie, anyị nwere ike ime ya ugbu a ndị niile anyị nwere nhọrọ a na profaịlụ anyị. Akụkụ abụọ (otu akụ) na "Nyefee" ga-apụta na nchịkọta profaịlụ na elu dị n'okpuru OMLỌ. N'oge a, ndị a bụ profaịlụ nyocha nke ndị ọrụ ndị ọzọ niile ga - esochi. A-akpali nnọọ mmasị nlereanya bụkwa na hip Uru PI anyị na-ekpebi ndị ọrụ onwe anyị. Ndị na-ere ahịa na ndị zụrụ ahịa ahụ ekwuputara na uru mmanụ a beeụ a beeụ na akwụkwọ ozi na PI ma mee azụmahịa ahụ. Mmanụ aeyụ rutere dị ka e kwere ná nkwa, ya na mkpụrụ ego ahụ bịakwara.
[quote style = ”style-2 ″] PI niile akwụpụtara ga-adị maka ịfefe n’etiti akaụntụ naanị mgbe“ ndị na-egwupụta akụ ”gị niile gosipụtara njirimara ha. Ruo oge ahụ, naanị mkpụrụ ego nke ị nyere onwe gị iwu ka dị! [/ Quote]
Ma nke a ọ bụ ihe nlereanya ziri ezi maka ahịa dị ugbu a ma ọ bụ na ọ bụghị, oge ga-agwa. N'ezie, ha bụ ndị guzobere ya PI Network ruo ugbu a ha emeela ihe ha kwere nkwa na nke a abụghị obere ego. Enwere ihe karịrị nde 2 na ọkara ugbu a ndị ọrụ nke ngwa ahụ na enweghị ihe gosiri na uto nke netwọkụ n'onwe ya ga-akwụsị n'oge ọ bụla. Ọzọ, PI Network bu ugbua oso ugbua na ngwa ngwa n’ime uwa! Anyị ka nọ na ọkwa izizi ya echela ma sonye anyị ⤵️⤵️⤵️⤵️
Soro ndị enyi kerịta
pi netwọk ngwa
pi netwọk slovenia
Mgbe ụfọdụ ọ bụ naanị ige mmadụ ntị ma gosi ha na ọ bụghị naanị ha. Mana ọ bụrụ na ị nwere okwu, echiche ziri ezi na ihe ọmụma ị ga - achọ ịkọrọ ụwa, ... ọ ga - adị mma ma ọ bụrụ na idetuo ha. "Anyị na-ekerịta ihe ọma iji nweta ihe ọma" - SK
Njikọ ọdịnayaKAR THA Ọdee akwụkwọ a
Etu esi eji ozi kọmpụta na Instagram?
Ederede ederede maka blog gị?
Ogbaji - Ọnwa Abụọ 14, 2017 0
Na-alụsokwa oke ibu? Enwere ngwa ngwa ọnwụ maka ebumnuche a. Site na ndị nke na - agwa gị calorie ole ị ga - eri ...
Slovenian kiiboodu maka gam akporo
Ekwentị mkpanaaka Ọnwa Abụọ 22, 2017
Kedu ihe kpatara Facebook anaghị adọta ọkwa m ikpeazụ?
Mgbakọ Ọnwa Nke Asatọ 6, 2017
Nweta ego na Intanet
Mgbakọ Ọnwa Abụọ 6, 2017
Mgbakọ Ọnwa Mbụ 23, 2020
582Ndị na-eso ụzọSoro
173Ndị na-eso ụzọSoro
Nhọrọ nke EDITOR
Speciesdị anwụnta 30 na Slovenia?!
Ulo na ubi 6 Mee, 2021
Nrọ na nkọwa ya Ọnwa Nke Anọ 3, 2021
Bọchị Ndị Nne
Echiche ndị ziri ezi 24 March, 2021
ISIOKWU ND FA NA-AMAS FA
Horoscope ụbọchị Kedu akara nke m bụ nke ya?
Horoscope 19 March, 2018
Olee otú iji tọgharịa ekwentị?
Ekwentị mkpanaaka Ọnwa Abụọ 21, 2017
AKKỌ NA-AMA N’ANYA
Mma na Ike31
Nrọ na nkọwa ya23
Echiche ndị ziri ezi14
Nhazi na njikarịcha weebụ: AB TWOỌ
Kpọtụrụ anyị: info@zlowdaj.si
Rights Zlowdaj.si ikike niile echekwabara - 2020
Ogbaji - Ọnwa Abụọ 4, 2020 0